အနောက်နိုင်ငံများကို ဦးတေဇက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အနောက်နိုင်ငံများကို ဦးတေဇက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ပြီ
Posted by nyimalay on Feb 18, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Society & Lifestyle |4comments
“အနောက်နိုင်ငံများကို ကျွန်တော်က စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနောက်နိုင်ငံလုပ် Airbus များကို ကျွန်တော်တို့ အဲပုဂံ လေကြောင်းလိုင်းမှာ ပျံသန်းပြေးဆွဲခြင်း မပြုဘဲ ရပ်နားထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆို လေယာဉ်တွေကို လုံးဝ လက်ဝယ် မထားတော့ပါဘူး။ ပြန်ရောင်းလိုက်ပါပြီ။ အနောက်နိုင်ငံတွေကို ပြန်မရောင်းပါဘူး။ ဒန်အိုးဒန်ခွက်လုပ်တဲ့ အာရှသားတွေဆီကိုပဲ ပြန်ရောင်းမှာပါ” ဟု ဦးတေဇက ပြောသည်။
ထိုသို့ မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်ကြီး ဦးတေဇ၏ ပိတ်ဆို့ မှုဒဏ်ကို ခံရသဖြင့် အမေရိကန်နှင့် ဥရောပ နိုင်ငံများ တွင် ဒန်အိုးဒန်ခွက် အရောင်း အ၀ယ်လုပ်ငန်းများ ကျဆင်းသွားပြီး စီးပွားရေး အကြီးအကျယ် အထိနာ သွားသည်ဟု သိရသည်။ ဦးတေဇ၏ လေယာဉ် မပြေးဆွဲမှုကြောင့် အနောက်နိုင်ငံသားများ အနေဖြင့် လေယာဉ်ဖြင့် ခရီးမသွားနိုင်ကြတော့ပဲ နွားလှည်းဖြင့်သာ ခရီးသွားလာနေကြရသည်ဟု သတင်းတပုဒ်က ဆိုသည်
ဦးတေဇ၏ ပိတ်ဆို့မှု ရိုက်ခတ်ခြင်း ဒဏ်ကို ဆင်းရဲသားများ၊ လူလတ်တန်းစားများပါ ခံကြရကြောင်း၊ စီးပွားရေး အတိဒုက္ခ ရောက်မှုကြောင့် စိတ်သဘောထားများလည်း ပြောင်းလဲသွားကြကာ တဦးနှင့်တဦး မုန်းတီးမှုများ သိသိသာသာ ပေါ်ပေါက်လာကြောင်း၊ ဦးတေဇ၏ ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အမုန်းတရားများ လျော့ပါးရေးအတွက် ချစ်သူများနေ့ကို ဦးတေဇ၏ ပိတ်ဆို့မှုဒဏ် ခံရသည့် နိုင်ငံများအပြင် တခြားနိုင်ငံများကလည်း ပူးတွဲ ကျင်းပခဲ့ကြရကြောင်း၊ သို့သော် မလေးရှားကဲ့သို့သော နိုင်ငံတချို့တွင် ချစ်သူများနေ့ကို ကျင်းပခြင်း မပြုရန် တားဆီးမှုများရှိခဲ့ပြီး ထိုသို့သော တားဆီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဦးတေဇက ဖိအားပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်ဟု မြန်မာ့အရေး လေ့လာသူတို့က သုံးသပ်ကြသည်။
Forward Mail မှပြန်လည်ဝေမျှပါသည်။
အနောက်နိုင်ငံတွေ သနားပါတယ် ဦးတေဇရယ်ပိတ်ဆို့မထားပါနဲ့ ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါနော်
ခိခိ၊ ကွေးကွေး မနောက်ရဘူးနော်။
အင်းလေ . အဲနိုင်ငံတွေတော့ ဘယ်လိုစီးပွားရေးလုပ်တော့မလဲ ။ Human Development Index နဲ့ တစ်ဦးကျဝင်ငွေ ကလဲမြန်မာနိုင်ငံနဲံ့ မတူ ။အရမ်းနိမ့်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကို အဲလို ပိတ်ဆို့တော့ အနောက်နိူင်ငံ ကလူတွေ ကို လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု မရှိဘူးပေါ့ ။
Wow. အိုဘာမားလာ ဒူးထောက်မှပြန်ဖွင့်မလား မသိဘူး။